Grey Stripes Oversized Dress Maxi | Buddhatrends
Dressed Maxi Dress
$80.10 $89.00 Manavotra 10% ($8.90)
Gray / M Gray / L Beige / M Beige / L
Mijanona mozika miaraka amin'ny lamaody maoderina maoderina izay tena tsara tarehy tsara tarehy Maxis Dresses. Amboary ny endriky ny volon'ondry sy ny lamban-damba voajanahary izay mahatonga anao hitony kokoa sy lava iray manasongadina ny haavonao. Amin'ity lohataona ity, avelao ity akanjo ity hanome anao ny endriny marevaka, mihitsoka amin'ny mistery mahafinaritra.
habe tratra Body Length halavan'ny tànan'akanjo
Tahaka ny amin'ny famaritana azy, dia mifanentana tsara sy mahomby. Ny pockets dia ambany kely, na angamba manana sambo kely aho. Izaho dia 161cm, ary L izay 132cm dia lava be mankany amin'ny tany. Tsara kokoa ny mahazo L raha te ho tahaka ny modely. Tena faly tamin'ity fividianana ity.
Zavatra noraisina tamin'ny andro 10. Mora ny fitaovana. Na dia lehibe ho ahy aza
Nahazoana herinandro 2. tsara vidy. ny lokony dia beige bey noho ny efa nandrasana fa mbola tsara izany. Pockets !! SURPRISE mahafinaritra
Ireo zazavavy fandefasana entana haingam-pandeha haingam-pandeha dia hamporisika mafy tokoa !!!
Akanjo goavana ho an'ireo izay mahafantatra ny fomba fitafy sy ny fanitsiana ny rakitra amin'ny fanapahana ireo zavatra ireo. Tsy hisy handalo intsony
Mahafinaritra ny kalita, manoro ny mpivarotra aho!
Tsara kalitao sy fitaovana tsara, mifanandrify amin'ny famoronana vokatra. Tena mahafinaritra ny mitafy! Fifandraisana maimaim-poana!
Ny fiakanjo azy dia mifanaraka amin'ny zavatra rehetra andrasana ary mifanaraka tanteraka amin'ny famaritana. Mahafinaritra ny manao. Mipetaka tsara nefa marika manokana amin'ny lamba. Manao akanjo mahafinaritra aho, ary amin'ny andro mafana dia ny ankamaroan'ny.
Ny lamba dia tena mahafinaritra, toy ny kodiarana. Ny haaviko dia 170 ary ny akanjo dia midina amin'ny tongotra. :) misaotra anao amin'ny famerenana haingana.
T *** ny
fitafiana mahafinaritra ary milamina tsara. Fitaovana ilaina.
A **** ny M.
Tiavo ity akanjo ity.
Ny habaka l-maimaim-poana amin'ny 54-56) tena faly)
tena tsara!!!! tsara ho an'ny fahavaratra
O ** ny V.
Ity no akanjoko faharoa! Voalohany dia nividy akanjo beige! tia ity hoodie! tsara sy mendrika ary tsara tarehy! Navoaka tamin'ny herinandro roa tany Alemaina. ny habeny m fa raha ny amiko kosa dia mihaona xxl ...)))
Ankizy tsara tarehy, tia azy io. Misaotra anao
Hijery ny kintan'ny 105. vokatra tsara, fifamoivoizana haingana. Misaotra indrindra anao.
A ******** ny M.
Tena tsara toetra, lehibe ny ahy. Manolotra izany ho an'ny reniko aho, tena faly izy amin'ity akanjo ity. Izy dia 170 hight sy 80 lanjany.
D ** ny M.
Tsara fitafiana. Asio tahaka ny sary mampiseho.
Ity dia akanjo tsara tarehy, tia ny famolavolana.
Tena faly tamin'ny fividianako
Mahatalanjona fotsiny ny zava-drehetra! Misaotra anao indrindra.
Tiako ity akanjo ity! ity no faharoa, ankehitriny tsyeta kaki. Tianao ny sary, raiso ny lehibe indrindra. ny lamba! akaikin'ny lamba fisaonana rongony! quality tailoring. Tsy misy vombony tonga haingana. huge благодарностьпродавцу!
Tena afa-po aho
Tsara tarehy, akanjo tsara akanjo ....... aho UK lehibe 12, ary na dia lehibe be amiko aza ny M, dia mbola miezaka ny mijery milamina ... tena marefo, ety ety! Afaka manoro hevitra ny fanamafisana avy any Scuwlinen .... mety ho lafo vidy kokoa noho ny mpivarotra hafa izy ireo, fa ny hatsaran-toetra sy ny fitongilana dia tsara kokoa.
Tsara toetra tsara 'dia tonga lafatra